भारत को हरियाणा बाट दुइ तोला सुन र तिन लाख नगत सहित लिएर महिला फरार
२८ पुष २०७६, सोमबार १८:३३ प्रकाशित
नया दिल्ली – भारत को हरियाणा राज्य बाट एक बिबाहित महिला एकाएक सम्र्पक बिहिन भएअकी छन ! हरियानाणा को सोनिपत जिल्ला नाथुपुर बाट महिला २ तोला सुन र ३ लाख नगद लिएर फरार भएको खबर उनका श्रीमान हरि महरा ले खोज सङ्रह लाई जानकारी दिनु भयो !
सोमबार सझ पिडित हरि महराले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट मार्फत स्टाट्स राख्दै सबैलाइ आफ्नो फरार श्रीमति खोज्दिन आग्रह समेत गरेका छन हेर्नुहोस उहाको स्टाटस जस्ता को त्यस्तै :-सुचना सुचना दुई हात जोडेर तपाइहरु लाई बिन्ती गर्दै छु सबैले शेयर गर्दिनु होला
अत्तरिया कैलाली बस्ने हाल भारत को हरियाणा मा रोजगारीको लागि म संग बस्दै गरेकी धोकेबाज मेरि श्रीमति लक्ष्मी पौडेल हिजो म कोठा बाट डिउटि गएका बेला कोठा बाट निसकेर साँझसम्म कोठामा नफेके पछि खोजतलास गर्दा उनी अर्कै केटासंग भागेको थाहा भयो!
अहिले मेरो सानो 1 बर्ष को छोरो छ यो सानो बालक को बिच्च्ली भएको छ बच्चाले आमा आमा भनेर चिच्याउदै छ म एक्लै यो क्र्म भुमी मा लुटेर गैइ
अहिले फरार भएकी छ सम्रक मा छैन ! साथै म सङग भएको जति २ तोला सून र ३ लाख रूपियाँ लिएर गएकी छन तपाइको १ शेयर ले यो १ बर्श को बालक ले नया जीवन मिल्ने छ !
तपाईले यो मेरो श्रीमति कतै देख्नु भो भने मेरो नमबर मा खबर गरीदिनुहोला र खबर गर्ने ब्यक्ती लाई ३० हजार नगद इनाम दिने छु पिलिज सहयोग गर्दिनु होला
Mobel number 00917056081319
साथीहरू सेर गरीदिनुहोला !
२८ पुष २०७६, सोमबार १८:३३ मा प्रकाशित